musha nyika dzakabatana Akasanganiswa Maartist Brock Lesnar Utano Nyaya Plus Untold Biography Facts
CB inopa Nhoroondo Yese yeWWE Superstar inonyanya kuzikanwa nezita rezita rezita “Chikara Chinopfekwa".
Our Brock Lesnar Childhood Story pamwe neS Untold Biography Facts inounza kwauri nhoroondo yakazara yezviitiko zvinoshamisa kubvira paudiki hwake kusvika panguva.
Kuongororwa kweAmerican nyanzvi wrestler uye MMA nyeredzi kunosanganisira nyaya yehupenyu hwake pamberi pemukurumbira uye kumashure kwemhuri. Zvikuru zvakadaro, mazhinji OFF uye ON-Screen zvishoma-zvinozivikanwa chokwadi nezvake.
Hongu, munhu wese anoziva kuti akakunda WWE Heavyweight Championship kakawanda. Nekudaro, vashoma chete ndivo vanofunga Brock Lesnar's Biography, iyo inonakidza kwazvo. Zvino, pasina imwe ado, ngatitangei.
Brock Lesnar Yehuvana Nyaya - Hupenyu hwepakutanga uye Mhuri kumashure:
Brock Edward Lesnar akazvarwa musi we 12th waJuly 1977 muWebster kuSouth Dakota, United States.
Akanga ari mwana wechitatu akaberekwa naamai vake, Stephanie Lesnar (murimisi wekurima) uye kuna baba vake Richard Lesnar (zvakare murimisi wehuchi).
Kuzvarwa kuvarimi, Mudiki Lesnar aive nemavambo ekuzvininipisa ehupenyu mumhuri yemukaka yemhuri yake kuWebster kwaakakurira pamwe nevakoma vake Troy naChad pamwe nehanzvadzi yake mudiki Brandy.
Mudiki uyu akapedza hudiki hwake achishanda nesimba papurazi remukaka, iro raive tsime remhuri yake rekuraramisa uye airara mumusha wevabereki vake.
Pasinei nemararamiro echistoic aitonga hudiki hwake, Lesnar aida nzvimbo yake yekumaruwa, iyo yaaibata sejimu yake yega uye akatanga kurwisana neamateur paakanga achingova nemakore 5.
Brock Lesnar Dzidzo:
Zvinonyanya kuzivikanwa pakati pekufambira mberi kwaLesnar pakudzidza kwaive kudzidza kwake Webster High chikoro muSouth Dakota.
Pakanga pari pachikoro apo Lesnar akawedzera nhabvu kumitambo yehudiki uye, mugore rake repamusoro, akaita chido chake cheamateur wrestling nekutora chikamu mumakwikwi.
Akazofambira mberi kusvika Bismark State College in North Dakota kwaakatora chido chake chekuita zvechimbichimbi kunzvimbo dzakakwirira nekukunda muchechi weNational Junior College Athletic Association (NJCAA) mukurwisana kunorema kwekurwisana mumakore ake.
Hazvina kutora nguva refu marekodhi ake emutsimba akanakisa akamuwanira bhezari kuYunivhesiti yeMinnesota, kwaakapedza dzidzo yake yekukoreji uye akaunza basa rake remutsimba rakabudirira kusvika kumagumo mugore ra2000.
Brock Lesnar Biography Chokwadi - Mugwagwa Kune Mukurumbira Nhau:
Lesnar, mushure mekunge apedza chikoro kubva kurejiji, haana kurasikirwa pamharadzano yekusarudza basa. Kunyanya zvakadaro, ukama hwaakavaka neavo-vaigara pamwe chete uye mune ramangwana WWE pamwe naye, Shelton Benjamin paYunivhesiti yeMinnesota, akanga ari muparidzi wemugwagwa waakanga asarudzwa kare kuti aende.
Mukomana wechidiki aneshungu aive mukutanga 20s akapinzwa muWWE naGerald Brisco, WWE Hall of Famer akafadzwa nekurwa kwaLesnar ku2000 National Collegiate Athletic Association (NCAA) Division I heavyweight wrestling Championship.
"Miniti Brock Lesnar akafamba achibva pamucheka muSt. Louis, Mo., paakakunda mukwikwidzi wake wenyika, ndaiziva kuti uyu murume aizova munhu wenguva refu,".
Akayeuka Brisco yezvaaigona kuona muLesnar.
Lesnar akasainwa zviri pamutemo kuWWE (yaizivikanwa seWorld Wrestling Federation WWF) mugore ra2000 uye yakatumirwa kunharaunda yekuvandudza indasitiri muOhio Valley. (OVW).
Yaive munharaunda yekuvandudza iyo Lesnar yakaumba timu yeteki naShelton Benjamin, waaimbogara naye kuYunivhesiti yeMinnesota.
Pamwe chete, vakakunda OVW Southern Tag Team Championship katatu Lesnar asati adaidzwa kunzira huru yeWWF muna 2002.
Brock Lesnar Biography - Simuka Kukurumbira Nyaya:
2002 raive gore rine zviitiko kuna Lesnar, uyo akaita terevhizheni yake WWE kutanga munaKurume 2002 nekurwisa Al Snow, Maven naSpike Dudley panguva yemutambo wavo.
Akatumidzwa zita remadunhurirwa rekuti "Icho Chinotevera Chinhu Chikuru" nemumiriri wake Paul Heyman, Lesnar akanyora musanganiswa wekukunda uye kurasikirwa mukurwa kwakazotevera pakati paApril naJuly 2002.
Kubudirira kwake, zvisinei, kwakauya muna August 2002 paakakunda Dombo paClassSlam, kukunda kwamuona achivhuna Dombo kunyora nekuva itsva WWE Undisputed Champion panguva ye 25.
Brock Lesnar Rudo Hupenyu:
Brock Lesnar ane chete hukama huviri. Tinokuunzira mashoko ehupenyu hwehupenyu.
Chokutanga chaiva hukama hwake nemuenzaniso wekusimba, Nicole McClain, waakasangana naye ndokutanga kufambidzana mugore rake repamusoro paYunivhesiti yeMinnesota mu1999.
Kunyange zvazvo vana vacho vasina kumbobvira vakaroorana, hukama hwavo hwakakonzera kuberekwa kwamababa Ruka naMya (akazvarwa 2000).
Achifambira mberi, Lesnar akakweverwa kumukadzi wrestler, Rena Sable uyo akazova mudzimai wake weramangwana. Vaviri vacho vanotanga kutanga kufambidzana mu 2004 apo Sable akarambana nemurume wake wekare uye wrestler, Marc Mero.
Makore maviri gare gare vakasunga pfumo pa6th yaMay 2006. Muchato wavo unokomborerwa nevanakomana vaviri, Turk (akazvarwa 2009) naDuke (akazvarwa 2010).
Asides kubva kuvanakomana vaviri, Lesnar ndibaba vokurera kuna Mariah (akafananidzirwa pazasi), mwanasikana akaberekwa nemuchato waSable nemurume wekutanga Wayne Richardson (akaroora kubva ku1986 kusvika 1991).
Brock Lesnar Hupenyu Hwemhuri:
Brock Lesnar akaberekerwa mumhuri ye6. Tinokuudza mashoko echokwadi nezvemhuri yemhuri yake.
Nezve baba vaBrock Lesnar:
Baba vaLesnar, Richard Lesnar aive murimi wemukaka uyo akatsigira dzidzo yemwanakomana wake nemari yaakatenga mukutengesa zvigadzirwa zvepurazi.
NdiRichard uyo akaita kuti Lesnar apinde mumakwikwi ewrestling panguva yake yekutanga dzidzo uye achiri kutsigira basa remwanakomana wake rekurwa kusvika zvino.
Nezve Amai vaBrock Lesnar:
Amai vaLesnar, Stephanie Lesnar akashandawo mudhayari remhuri. Stephanie aivewo nerutsigiro rukuru kune zvaiitwa naLasner zvekurwa, achishanda senge simba rinokurudzira kukunda kwake.
“Amai vangu havana kubvuma zvikonzero. Kana ini ndakarasikirwa, yaive yangu mhosva. Kungofanana nekuchema kwaisatambirwa kana ndikakundwa, pakanga pasina kupemberera kukuru kana ndikakunda.
Pane kudaro, amai vangu vaingoti, 'Basa rakanaka, Brock. Wakunda. Ndozvamunofanira kuita. '”
Anoti Lesnar mubhuku rake Death Clutch: My Story of Determination, Domination, uye Survival.
Nezve Brock Lesnar Vanun'una:
shoma anozivikanwa nezvevakoma vaLasner vakuru Troy naChad Lesnar, pamwe chete nehanzvadzi yake, Brandy.
Maererano nebhuku rake; Death Clutch: My Story of Determination, Domination, uye Survival, Lesnar anoratidza kuti vanun'una vake vaifarira mune zvemitambo asi havana kumbozviendesa kune unyanzvi.
“Vakoma vangu vaviri, Troy naChad, vaive vatambi vepamusoro mune zvavo, asi vakasarudza kusaita zvemitambo sebasa. Munin'ina wangu murombo, Brandy, aive mutambi akangwara zvakare, Asi kunyangwe aigona sei, aifanira kugara mumumvuri wehanzvadzi yake huru Brock. ”
Brock Lesnar Untold Biography Chokwadi - Mazita emazita:
Lesnar ane mazita emadunhurirwa akati wandei anotakurwa nehunhu hwake mumutsara wewrestling. Mazita emadunhurirwa anosanganisira "Uyo muna 22-1", "Icho Chinotevera Chinhu Chikuru" uye "Anomaly". Vamwe ndevaya "Meya Wamasikati weSuplex Guta", "Mukundi" uye "Chikara Chakazvarwa".
Brock Lesnar Hupenyu hweMunhu:
Lesnar murwi akatsunga wenyanzvi uyo kurerwa kwake kwakamugadzira mu "Mukundi" uyo anokunda kupokana kwese.
Kunyangwe asingashiviriri kukundikana, dzimwe nguva jongwe uye kuzvitutumadza, Lesnar anozvigamuchira iye zvaari uye anokoshesa kana vamwe vachimuona muchiedza chimwe chete.
Mukuwedzera, Lesnar munhu anonyanya kuvanzika asingadi vhidhiyo. Nokusarura, haawanzobatanidzi mubvunzurudzo uye anobvisa mibvunzo ine chokuita nehupenyu hwake hwega
Brock Lesnar Chokwadi:
Lesnar mu2003, vakatora pfupa kubva mukurwisana kuti vaite basa risina kubudirira neMinnesota Viking muNational Football League NFL.
Mhedziso yakakosha yekodha pachifuva chake inomiririra zvakawanda zvezvinetso zvaaifunga muupenyu hwake mushure mekusiya WWE mu 2003. Maererano naye:
"Ndainzwa kunge hupenyu hwakabata pfumo kumusoro chaiko pahuro pangu, saka ndakaenda pasi peiyi pfuti nekuti ini ndaisamboda kukanganwa chaizvo manzwiro andaiita panguva iyoyo." Ndinoziva kuti ndinogona kushandisa ndangariro iyi sekurudziro. ”
Lesnar pakati pegore 2006-2011 akateedzera basa mune yakavhenganiswa martial arts MMA uye anozivikanwa kuve akahwina iyo Yekupedzisira Kurwisa Championship (UFC) Heavyweight Championship munaNovember 2008.
CHOKWADI KUTI: Thanks for reading vedu Brock Lesnar Childhood Story pamwe chete biography nhoroondo. At ChildhoodBiography, isu tinoedza kururamisa uye kururamisa.